सात कक्षामा पढ्ने किशोरीले बच्चा जन्माइन्, बच्चाको बाबुको बारेमा सोध्दा किशोरीले दिएको जवाफले परिवार नै अचम्ममा ? – PathivaraOnline
Home > रोचक > सात कक्षामा पढ्ने किशोरीले बच्चा जन्माइन्, बच्चाको बाबुको बारेमा सोध्दा किशोरीले दिएको जवाफले परिवार नै अचम्ममा ?
Poonam July 7, 2021 July 7, 2021 रोचक	0
पछिल्लो समय किशोर किशोरीहरुले गर्ने प्रेमलाई समेत समाजले त्यति कठोर रुपमा लिन छोडेको छ । यसै अवस्थाको फाइदा उठाउँदै एक किशोरले आफ्नै सहपाठीसँग सम्बन्ध बनाएका छन् । उनले त्यस्तो कार्य गरेपछि किशोरीको गर्भ मात्रै बसेन, बच्चा समेत जन्मियो ।
यो घटना भारतको हो । त्यहाँ पश्चिम बंगालमा सात कक्षामा पढ्ने बालिकाले बच्चा जन्माएकी हुन् । १३ वर्षीया बालिकालाई ब्ल्याकमेल गरेर सहपाठीले सम्बन्ध बनाएको खुलासा भएको छ । घटनापछि आरोपी सहपाठी आफ्नो परिवारको साथमा बंगादेश भा गे का छन् । आरोपीका हजुरबुवा बंगलादेशमा बस्ने गरेका छन् ।